कोरोना जीवाणुको अर्थ राजनीति
२०७६ चैत २९ शनिबार, काठमाडौं। कोरोना भाइरस ‘कोभिड-१९’ का कारण अर्थतन्त्र कमजोर हुदै गएपछि अहिले नै विश्वका कैयौँ कम्पनीले कर्मचारी व्यापक कटौतीका सूचना दिइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, आइएलओले शुक्रबार कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा १ अर्ब २५ करोड मानिसको रोजगारी जोखिममा रहेको बताएको छ। उसको प्रतिवेदनअुनसार यीमध्येका धेरै मानिस भोलि पनि कामविहीन बन्न सक्छन्। ... बाँकी अंश»
भाडामा बस्नेले विद्युत् महसुल छुट पाउँछन् : ऊर्जामन्त्री पुन (अन्तर्वार्ता)
२०७६ चैत २९ शनिबार, काठमाडौं। कोरोनाविरुद्धको लडाइँ जित्नका लागि सरकारले लकडाउन गरेको छ । सोही क्रममा नागरिकलाई राहत दिने लक्ष्यका साथ सरकारले १५० यूनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई २५ प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै लकडाउनमा सञ्चालन हुने उद्योगलाई समेत ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, यही विषम् अवस्थामा केही ठूला आयोजनासमेत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसै सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले विशेष अन्तर्वार्ता गरेको छ । राससका लागि सम्वाददाता रमेश लम्सालले मन्त्री पुनसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश: ... बाँकी अंश»
२०७६ चैत २९ शनिबार, हामीले कोरियामा अभियान सुरु गर्नु पूर्व नै कोरोना भाइरस (कोभिड १९)संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको थियो । संक्रमित हुने देशहरुमा चीन पछि दोस्रो स्थानमा कोरिया थियो । कोरियाले एकदमै छिटो संक्रमितहरु पत्ता लगाएर भयावह अवस्थालाई कावुमा लिने प्रयास गर्‍यो । यस्तो अवस्था आउनुमा धेरै कारणहरू छन् । कोरियन सरकारको कोरोना संक्रमण रोकथामका निमित्त अहम भूमिका, बलियो आर्थिक अवस्था, आम नागरिकहरुको उच्च अनुशासन, उच्च प्रविधियुक्त कोरोना भाइरस परिक्षण गर्ने किट्स र यहाँको सरकारको सतर्कता नै प्रमुख उपाय थियोे । ... बाँकी अंश»
कोविड १९, खोप र हामी
२०७६ चैत २९ शनिबार, संसारमा कुनै भ्याक्सिन वा प्रभावकारी उपचार नभएको भाइरल रोग कोविड-१९ को सामना गर्नुपर्दा मानिसहरू त्रसित छन्। कोरोना भाइरस महामारीको आर्थिक प्रभाव धेरैजसो श्रमिक वर्गमा छ । अमेरिकामा मात्र विगत तीन हप्तामा १ करोड भन्दा बढी बेरोजगार भए । ... बाँकी अंश»
कोरोना भाइरस किन र कसरी सुरु भयो ?, यस्तो छ आध्यात्मिक मत
२०७६ चैत २८ शुक्रबार, विगत केही हप्ताहरुदेखि विश्व कोभिड-१९ को प्रको मा डुबेको छ । कोरोना भाइरस प्रकोपले विश्वभरि, सबै चिन्तित छन् । यो तर प्राकृतिक र अपेक्षित छ । हामीले पहिला यस्तो परिस्थिति कहिले पनि सामना गरेको थिएनौं र समग्र मानव पूर्ण रुपमा आज्ञात परिस्थितिको निर्णर्य गर्दैछ । ... बाँकी अंश»
यो तरिकाले मुलुक चल्दैन
२०७६ चैत २८ शुक्रबार, नेपालमा २००७ साल यता जनताको अधिकारको लागि भनेर धेरै किसिमको राजनीतिक परिवर्तन भए । २००७ सालको राजनीतिक तथा व्यवस्था परिवर्तन यता लगभग सात दशक पूरा भइसकेको छ। २०४६ सालको परिवर्तन पछि जुन किसिमबाट देशले दिशानिर्देश र लाइन लिनुपर्ने थियो त्यो रत्तीभर देखिएन। परिवर्तन केवल सत्ताको होड़बाज़ी, सत्ता परिवर्तन गर्ने भन्दा जनताको आधारभूत क़ुरामा परिवर्तन देखिएन। यस बीचमा सिंहदरबारको भित्तामा प्रधानमन्त्रीको तस्विरहरु भने थुप्रै परिवर्तन भए। ... बाँकी अंश»
२०७६ चैत २८ शुक्रबार, काठमाडौं। विश्वका शक्तिशाली मुलुकलाई समेत हल्लाइरहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि नेपालमा पनि सरकार र सम्बन्धित पक्षबाट उच्च प्राथमिकताका काम भइरहेका छन् । सरकारले रोकथामकै लागि यही चैत ११ लकडाउन जारी गरेको छ भने सीमानाका र हवाईमार्गबाट आवागमन बन्द गरेको छ । भाइरससँग जुध्ने यस मोर्चाको अग्रपङ्तिमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी रहेका छन्। ... बाँकी अंश»
नेपालमा कोरोनाको सुस्त परीक्षण, यस्तो छ अहिलेसम्म नेपालीको अवस्था
२०७६ चैत २८ शुक्रबार, विश्वभरमै रहेका नेपालीको बारेमा चर्चा गर्दा स्थिति राम्रो छैन । अहिलेसम्म १० नेपालीको ज्यान गइसकेको छ । ... बाँकी अंश»
कोरोना, लकडाउन र मजदुर
२०७६ चैत २७ बिहिबार, आज विश्व मानव जगत नै त्रासमा छ। टेलिभिजन, एफएम, अनलाइन र सामाजिक संजालमा राखिएका समाचारहरुलाई नियाल्दा सिङ्गो मानवजाति आक्रान्त पाइन्छ । आखाले देख्न नसकिने सानो जीवाणुले धनी, गरिब, कालो, गोरो, पहाड, समथर भुभाग केहि नभनी सबैलाई खेदिरहेको छ। अति बिकसितदेखि अल्पबिकसित र बिकासोन्मुख बिश्वका सबै राष्ट्रहरु त्यो सानो भाइरससँग लडिरहेका छन्। ... बाँकी अंश»
लकडाउनमा सरकारको प्रमुख काम: ‘ठेक्का दिने - ठेक्का तोडने - ठेक्का दिने’ !
२०७६ चैत २७ बिहिबार, तेस्रो हप्ताको लकडाउन घोषणा गर्दै (२५चैत्र) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस विरुद्ध लडाइको नेतृत्व चिकित्सिकबाट मात्रै सम्भव हुने वताए । तर तिनै चिकित्सक निर्भर हुने प्रमुख हतियारहरु–चिकित्सकीय उपकरण खरिदमा यही लकडाउनका बेला भएको भ्रष्टाचारलाई भने ‘कुप्रचार’ भनेर पन्छाए । ... बाँकी अंश»
कोभिड १९सँग लड्ने केजरिवालको फाइभ टी प्लान र हामीले सिक्न सकिने कुरा
२०७६ चैत २७ बिहिबार, भारतमा २१ दिनको लकडाउन जारी छ। हालसम्म ५ हजार भन्दा बढीको टेस्ट पोजेटिभ देखिएको छ भने १ सय ६० भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। ठूलो संख्यामा टेस्ट गर्ने तयारीमा छ। यो महामारी विरुद्ध लड्न भारतको सबै प्रान्तहरु आ आफ्नै तवरमा लागेको छ। ... बाँकी अंश»
वान बेल्ट, वान रोड, वान भाइरस : इटाली, ईरान कसरी हिड्ला चीनको ओबीओआरको बाटोमा ?
२०७६ चैत २६ बुधबार, एजेन्सी। विगत केही वर्षदेखि चीनले विश्व आर्थिक प्रभुत्वको लागि अघि सारेको आफ्नो ड्रीम कनेक्टिभिटी परियोजनाको सूत्रवाक्य रहेको वान बेल्ट, वान रोड (ओबीओआर) डोरीमा ७८ देशहरू जोडिसकेका छन्। २०२० तिर आएर यसमा थप दुई शब्द जवर्जस्त थपिएका छन् - 'वान भाइरस'। खासगरी पश्चिमाहरुबाट यो नयाँ शब्द थपिएर आएको छ। कोरोनको विस्तार भएसँगै, इटाली, इरान र अन्य देशहरुमा एक बेल्ट, एक रोड मात्र नभएर एक भाइरस पनि महसुस गरिन थालेको हो। ... बाँकी अंश»
श्रीकृष्णले लक्ष्मणलाई यसरी तिरे चौध बर्ष वनवासको ऋण
२०७६ चैत २६ बुधबार, काठमाडौं । त्रेतायुगमा जब भगवान् श्रीरामको राज्याभिषेक भइरहेको थियो तब लक्ष्मणलाई हाई आउन थाल्यो । जब निन्द्र आउन थाल्यो तब लक्ष्मण हास्न थाले । ... बाँकी अंश»
प्रधानमन्त्री ओलीलाई कांग्रेस नेता थापाको प्रश्न, 'सुझावलाई पनि प्रचारबाजी र बेमौसमी बाजा त भन्नुहुन्न?'
२०७६ चैत २६ बुधबार, काठमाडौं। राष्ट्रका नाममा संवोधन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सम्बोधनबाट चित्त नबुझाएका कांग्रेस नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई थप प्रश्न गर्दै घेरावन्दी गरेका छन्। थापाले प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक रुपमै ११ बुँदे प्रश्न गर्दै घेरावन्दी गरेका हुन्। थापाले सार्वजनिक गरेको ११ बुँदे प्रश्न यस प्रकार छन्ः ... बाँकी अंश»
कोरोना पछिको समय : यो कोरोनाको सुरुवातको अन्त्य हो वा अन्तको सुरुवात?
२०७६ चैत २६ बुधबार, म, मेरी श्रीमती र हाम्री सानी छोरी अमेरिकाको कुनै कुनामा छौं । मेरो पिता र माता नेपालको कुनै कुनामा हुनुहुन्छ । कारण स्पष्ट छ, धेरै नेपाली जस्तै हामी पनि जिजिबिसाको खोजीमा छरिएका छौ । परिवर्तन हाम्रै जीवनकालमा भन्ने दर्शनले मलाई तान्न त तान्यो तर मेरा लागि त्यहाँ मैले खोजेको परिवर्तन सम्भव थिएन, न त नरसंहारले परिवर्तन सम्भव छ भन्ने नेताबाट शासित हुन सक्थे। यदि तपाईं गरीब भएरै मर्नुभयो भने यो तपाईंको गल्ती हो भन्ने बिल गेट्स दर्शनबाट प्रभावित छु र सुखको खोजीमा यहाँसम्म आएको हुँ । ... बाँकी अंश»
बेलायतमा प्रधानमन्त्री अस्पताल भर्ना भएकै दिन उठ्यो राजीनामाको कुरा, नेपालमा कति सम्भव?
२०७६ चैत २६ बुधबार, विरामी प्रधानमन्त्रीलाई आराम गर्न दिएर नयाँ प्रधानमन्त्रीको माग गर्नुपर्ने हो। तर के हामी यो सबै गर्न सक्छौ। के स्वयं नेकपाका क्रान्तिकारी कमरेडहरु यो आँट गर्न सक्छन्? देश अघी बढ्ने नबढ्ने यस्तै आँटमा भर पर्छ। हेरौ कतिको आँट गर्छन नेकपाका नेता कार्यकर्ताले। कम्तिमा एक विरामी हजुरबा समानका प्रधानमन्त्रीलाई आराम दिलाउन त आँट गरौं। होइन भने देशले पनि विरामीबाट तङग्रीन धेरै नै समय लाग्छ। सबै यहि कुरेर बसौ। ... बाँकी अंश»
चीनको बन्धनमा रहिरहे बेलायतले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ
२०७६ चैत २५ मंगलबार, लण्डन। वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि चेतावनी दिएका छन कि चीनको प्रत्यक्ष खाना बजार रोग, महामारी र महामारीको लागि प्रजनन स्थल हो। यहि बजारका जनावरहरूबाट मानिसहरूलाई संक्रमण हुन्छ। यी सार्वजनिक कसाईखाना(स्लटर हाउस)२००३ को सार्स प्रकोप अघिको थियो जस्ले कोविड १९ लाई पनि उत्पादन गरेको छ। यद्यपि बेइजिङ्ग सरकारले यी 'अति जोखिम'ले भरिएका बजारहरू बन्द गर्नका लागि केहि पनि गरेको छैन। ... बाँकी अंश»
सबै कुरा जानिसके भन्ने शिष्यलाई गुरुले किन बजाए लौरो ?
२०७६ चैत २५ मंगलबार, आदिगुरु शंकराचार्यले एकदमै सरल शब्दहरूमा भने-'नित्य, अनित्य, विवेक, विचारा'। नित्य, अनित्य माने तपाईं कुनै पनि परिस्थितमा अर्थात् परिस्थिति चाहे अनुकूल होस् वा प्रतिकूल, विवेक विचार द्वारा, कुनै हलचल नगरी विचार गर्नहोस, यी सबै तपाईको जीवनमा कसरी भइरहेको छ? जब तपाईले विचार गर्नुहुने छ, त्यो विचार गर्ने प्रक्रियालाई हामी ध्यान भन्दछौं। तब उनले बिस्तार-बिस्तारै जीवनबाट सिक्दछ। ... बाँकी अंश»
कोरोनासंग लड्ने बेलायतको तरिका र अनुभव; जनचेतना नै मुख्य अस्त्र
२०७६ चैत २५ मंगलबार, लण्डन । बेलायतमा पनि दैनिक अवस्था नाजुक हुँदै छ तर मृत्युको संख्या घट्ने संकेत देखिएको छ । लकडाउनमा घर भित्र बसेको पनि २ साता बढी हुन लागेछ संक्रमण बढदो छ । ... बाँकी अंश»
चाणक्यका अनुसार सफल मानव बन्न यस्तो हुनुपर्छ जीवन शैली
२०७६ चैत २४ सोमबार, काठमाडौं । चाणक्य नीतिको १२ औँ अध्यायको तेस्रो श्लोकमा सफल मानव सम्बन्धि रहस्य बताइएको छ । यस श्लोकमा यस्तो जीवन शैली बताइएको छ जसलाई अपनाएर सफल मानव बन्न सकिनेछ । ... बाँकी अंश»